IFlethi kaMakhulu-Icocekile kwaye icocekile-Ayr, NQ - I-Airbnb
IFlethi kaMakhulu-Icocekile kwaye icocekile-Ayr, NQ
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguMarisa
IGranny Flat ibekwe eAyr, eQueensland.
Ibucala ngokupheleleyo kwindlu enengeniso yabucala, ilala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-4
1 Queen $85 isibini (esebenzisa ibhedi enye)
2 iibhedi enye kunye nesofa ibhedi $30 umntu ngamnye ngobusuku
-Igumbi elinye lokulala elinegumbi lokuhlambela le-Ensuite / yangasese.
-Ikhitshi eneplani evulekileyo/yokutyela/eLounge.
-Ipatio encinci yabucala yangaphandle enewasha kunye nendawo enengca.
Amaxabiso emihla ngemihla kunye neveki akhoyo.
** Porta-Cot iyafumaneka xa uceliwe. ** - akukho ntlawulo
Emva kweyunithi kukho indawo encinci enengca kunye nepatio efihlakeleyo. Ngaphambi kweyunithi kukho indawo enengca ekhokelela endlwini yethu. Ukuba unabantwana abancinci bamkelekile ukuba badlale emhadini wesanti kwaye basebenzise izixhobo zokudlala zabazukulwana bethu kunye nezinto zokudlala.
I-Ayr yidolophu encinci kwaye sihamba ngemizuzu emibini ukuya kwemithathu ukusuka kwiSitalato esiPhambili okanye ukuhamba ngemizuzu engama-20, nangona ndicebisa ukuba wenze oku kusasa okanye emva kwemini, njengoko ihlobo lethu lishushu kakhulu. Sihamba ngemizuzu eyi-10 ukusuka eAlva Beach.
Ndifumaneka ngalo lonke ixesha kwiindwendwe zam kwaye ndonwabile kuphela ukubonelela iimfuno zabo kunye nemibuzo kwindawo. Banokuqhagamshelana nam ngokobuqu ngokuza endlwini okanye ngefowuni okanye ngesms.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ayr